Ny fomba nataon’i ISIS nametrahany ny dindo maintiny tao Siria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2020 12:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, русский, polski, Italiano, Ελληνικά, عربي
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2014)
Toby ISIS aon Aleppo. Sary: Lens Young Halabi (Facebook)
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ireo andiany manokana amin'ny lahatsoratr'ilay vehivavy mpanoratra bilaogy no sady mpikatroka, Marcell Shehwaro, anoritsoritany ny tena zavamisy iainana ao Siria mandritra ny ady mitampadiana ao an-toerana, ifanandrinan'ny tafi-panjakana sy ireo mikatsaka ny hanongana azy.
Rehefa nangatahana aho hanoratra momba ny ISIS – Fanjakàna Islamika ao Siria sy Iràka, dia pejy fotsy no navelako nandritry ny andro maro teo amin'ny solosainako. Ahoana ho hanoratako momba ny ISIS ho an'ny hafa, hisolo tena ireo izay niaritra herisetra nihoa-pampana sy korontana? Ary andraikiktra toy inona no tazoninay amin'ny maha-Siriàna, raha ampitahaina amin'ny manerana izao tontolo izao, tamin'ny fiforonan'ny ISIS?
Ho fanombohana, ilaiko ny manazava hoe tsy mba nananan'ny vahoaka Siriàna ny fahafahana nandeha niantsena tany amin'ny “Tsenaben'ny Fandresena”, toerana nivarotana ireo entambarotra toy ny fahafahana mandositra an'i Assad amin'ny endrika nisehoan'ilay tao Tonizian”i Zine El Abidine Ben Ali, na fametrahana fialàna toy ny tao Ejiptan'i Hosni Mubarak. Tsy mba nanananay tamin'ny fatra sahaza ihany koa ny solika mba hividianana ny safidin'ny OTAN, toa an'i Libia. Ho solon'izany, ny Al-Qaeda no novidianay, izay hitanay nifatotra fehy mavo teo amin'ny vata fanaovana varoboba.
Raha lazaina tsotra, tsy dia nanam-pidiny loatra izahay Siriàna, raha ny hafa kosa nanana drafitra hanilihana ireo vokatra lany andro ho aty amin'ny firenenay, tamin'ny fampiasàna ny ràn'ny (faha)tanoranay.
Volana enina taorian'ny nanombohan'io, ny Revôlisiôna Siriàna, izay miditra amin'ny faha-efatra taonany, dia nalefa ny antso vonjy tamin'ny andron'ny fihetsiketsehana fantatra amin'ny hoe “Zoman'ny Fiarovana Iraisampirenena”. Avy eo niantso ny hametrahana faritra tsy azo isidinana, fampitsaharana ny fanitàrana fetrandro, ny fandroahana ireo masoivoho (ambasadaoro), fanohanana ny Tafika Malalaka ao Siria ary ny firotsahan'ny iraisampirenena.
Notakian'ilay Revôlisiôna ny handraisan'ny tsirairay ny andraikiny manoloana ny maha-olona, ary satria antso misokatra ilay izy, dia — indrisy — ny Al Qaeda no namaly.
Araka izany dia izahay Siriàna irery ihany ve no tomponandraikitra tamin'ny fipongaran'ny ISIS? Tsy vokatra avy eny an'arabenay na ny drafitray ny ISIS. Tsy mila azy ireo izahay mba hampihorohoro ny hafa, ary tsy nila ny fanomezandalana avy aminay ry zareo mba hiditra tamin'ireo seranam-piaramanidinay efa nakatona.
Mifanohitra amin'izay lazain'ny olona sasany, avy any amin'ireo sisintaninay nibànaka ry zareo no niditra nanketo aminay. Tonga avy any amin'ireo seranam-piaramanidina hafa, nitondra pasipaoro avy any amin'ny fireneny. Tonga teto aminay noho ireo fiheveran-diso sy ny fahatahorana ireo be volombava, variana tamin'ny ràn'ilay ankizy izay trotroinà lehilahy iray teny an-tsandriny.
Tsy sitrako, na segondra iray aza, ny hanasa ny tànanay ho lavitry ny andraikitray, amin'ny maha-Siriàna, manoloana ny fitomboan'io homamiadana io hanenika ny taninay. Farany, noho ny fahantràna dia niankohoka tamin'ny ISIS ny sasany. Ireo mpiaramiasa fahiny tamin'i Assad — ireo tenda fahefana sy mpisolelaka — dia nanao tahaka izany koa ho fitiliana mialoha ny fahefàna vaovao, satria ho azy ireo, tsy dia misy maha-samihafa azy loatra ny mahazo tanjaka amin'ny anaran'ny ISIS sy amin'ny anaran'i Assad.
Tao anatin'ny fahatsorany, nanohy ny diany ireo mpihoko teo aminay, nino hoe tonga hamonjy anay ny ISIS, tamin'ny filazàna fa tsy dia fahaizana mankasitraka loatra ny hitanisàna ny kileman-dry zareo, izay vetivety foana dia nivadika ho heloka bevava. Mpihatsara ivelan-tsihy an'arivony maro, mpanararaotra sy mpivarotra fivavahana ary ady no nanohy nisolelaka tao anaty hakanosàna, nanaraka ny nataon'ireo mpitari-pivavahana marobe izay natahotra fatratra tsy sahy ny hampitandrina ny tanora tsy hiankohoka amin'ny ISIS.
Nivanàka nanoloana ny fitaovana teny am-pelatànan'ny ISIS ireo mpitolona avy amin'ny Tafika Malalak'i Siria izay zara raha nanana fitaovana, izay, raha ampitahaina amin'ireo basy mahantra kely teny aminy, dia toy ireny zavatra navoaka avy any anaty kilalao an-dahatsary “Counter-Strike” ireny. Tsikelikely, foana tao anatin'izy ireo ny fahatsapàna ho zanak'ity firenena ity, ary ny sasany aza lasa nanatevina ny laharan'ireo mpamono.
Izy ireny no nanao izay haharetan'ny fisamantsamahana ideolojika sy politika lian-drà nisy teto aminay mandrapaha-difotra anay tao anatin'ny fofona mantsin'ny rà, ka nahatonga ny sasany ho vonona mihitsy ny hivarotra ny fanahiny amin'ny devoly mba hitsaharan'io ady io. Ary dia izay no nitranga: niara-nizotra tamin'ny devoly izahay. Ary dia nataon-dry zareo nampivarahontsana anay ny maha-laika anay, tamin'ny filazana fa mety hanimba ny firaisankinanay izany. Ary mba hiarovana ireo laharampahamehan'ny ady, nataony izay hatahoranay ny nofinofinay hanana fitondràna sivily demaokratika.
Raha toa andraikitray izao rehetra izao, dia misy ihany koa ireo izay nanao sorona ny ràny mba hiady ho azy io. Ary hatramin'ny tsy ela akory izao, izahay no ireo niaritra ny mafy indrindra ny fanaovana an-tendro sy ny fibodoany ny taninay. Nampangifirifry anay ihany koa ny ezaka nataony hanasàna atidoha ny tanoranay. Izahay mpihoko, izay tao anaty ampahan-tsegondra vitsy monja, no lasa nenjehin'ny andaniny roa – fanjakana sy ISIS, nitarika ny firenena hafa ho liana tamin'ny hoavy izay azonay antoka fa hanjakàn'ny heloka bevava — heloka bevava iray tsy ho anay amin'ny maha-firenena fotsiny, fa heloka bevava hisy fiantraikany amin'ny zanak'olombelona manontolo. Inona no haterak'io fanaovana an-tendro io amin'ny hoavy? Ary iza, amin'ireo tsy manantsiny eto an-tany, no hataony lasibatra?
Satria heverin'ny ISIS fa tsy manana firenena tena izy ny Siriàna, dia nobodoin-dry zareo ny taninay. Ho azy ireo, ny hany mba nanananay dia izay vokatra avy amin'ireo Tandrefana tsy azo itokiana (tsy mpino). Tamin'ny 9 Aprily 2013 no nambaran'ny Al Jazeera ny fibodoana ny taninay, ary nanomboka tamin'izay fotoana izay ny ISIS no niady taminay. Toy ny miady amina revôlisiôna iray tsy eken'ny sain-dry zareo no fomba niadiany taminay, tamin'ny fandoroana ny sainanay sy fanesorana ary fampanjavonana ireo mpihoko. Ary tsy tahaka ireo mpifanandrina aminay, tsy nisy na izay aza sahy nametraka fanontaniana.
Mbola tsaroako ny fotoana nandehanako teo anelanelan'i Aleppo sy Tiorkia nandalo làlana ambanivohitra iray, nahita ireo toerana maro fanarahamason'ny ISIS eraky ny làlana, ary nahatsapàna tanaty hirifiry fa novainy an-kery ny anaran'ireo vohitra tany ambanivohitray tany. Zara raha misy ahafantaranao fa hoe ao Siria ianao amin'izao fotoana izao. Nolokoin-dry zareo ho mainty daholo ireo sainan'ny revôlisiôna. Nofafan-dry zareo ny anaram-bohitra, nosoloin-dry zareo taminà vatobe mainty nasiany soratra hoe “Miarahaba anao ny Fanjakàna Islamikan'i Iràka sy Siria”.
Atahorako ny hanabarabara io fibodoana tsy misy henatra io. Matahotra aho satria indray mandeha ry zareo Palestiniana nanabarabara ny fotokevitra izay niheverin-dry zareo ny atao hoe firenena tsy ho azo tanterahana eo amin'ny taniny, sy satria tany aloha tany nihomehezan'ireo Iraniàna revôlisiônera ny hevitra hoe mety ho afaka hitelina ny revôlisiôna nataon-dry zareo ny fanjakana ara-pivavahana iray. Atahorako ny hihomehy ny zavamisy, ary mivarahontsana aho rehefa misaintsaina fa mety ho tafiditra anatin'ny dingana voalohan'ny fisaonana aho, dia ny fandàvana, ary hiafara anaty marimaritra iraisana sy ny fileferana.
Mbola manakoako ato an-tsofiko ireo tenin'ilay mpamily fiara fitaterana nahamarika ny alaheloko. “Rahampitso, hanorana io, ary dia hifafa io loko mainty io” hoy izy. Ary dia mivavaka aho mba ho avy ny orana ao Al Raqqa, Al Bab, Manjib sy Mosul ary ireo faritra maro bodoin'ny ISIS. Fa mialoha izany rehetra izany, mba hitondràna ny rahona ho any amin-dry zareo, mila mirotsaka aloha ny orana ao Damaskaosy.
Marcell Shehwaro dia manoratra bilaogy ao amin'ny marcellita.com ary mibitsika ao amin'ny @Marcellita, samy amin'ny fiteny arabo avokoa. Vakio ato ireo lahatsoratra hafa ao anatin'ilay andiany soratany.